Ilifa emathanjeni: uhambo oluya kolona loyiko lunzulu | Uncwadi lwangoku
UDolores Redondo ngomnye wababhali abasefashonini kwinqanaba loncwadi lweSpanish namhlanje. Uye waba nodumo phakathi koncwadi lukawonke wonke oluthetha iSpanishi enkosi kuye I-Baztán trilogy. Ayimangalisi into yokuba, ukwaziwa kombhali waseSan Sebastian woyisile abafundi bezinye iilwimi ngenxa—ubukhulu becala—izihloko ezinjengezi. Ilifa emathanjeni (2013).
Le noveli yolwaphulo-mthetho iguqulelwe kwiilwimi ezingamashumi amabini anesibini ukuza kuthi ga ngoku. Njengofakelo lwangaphambili lwetrilogy ekhankanywe ngasentla (Umgcini ongabonakaliyoNgo-2013), Ilifa emathanjeni ilungiselelwe icinema (2019). Ifilimu ine-stellar cast ekhokelwa nguMarta Etura, uLeonardo Sbaraglia kunye no-Álvaro Cervantes, phantsi kolawulo lukaFernando González Molina.
1 Ilifa emathanjeni ngamazwi ombhali walo
1.1 I-trilogy exelwe ngokungekho mgca
1.2 amanani asentsomini
1.3 Uphuhliso oluzele ziziqendwana
2.2 Ityala elitsha eliyoyikisayo
2.3 Ngaba Yintsomi Okanye Iyinyaniso?
3.1 Izinto ezilungileyo zikaDolores Redondo
4 Malunga nombhali, uDolores Redondo
4.1 Iincwadi zikaDolores Redondo
Ilifa emathanjeni ngamazwi ombhali wayo
I-trilogy exelwe ngokungekho mgca
Kudliwano-ndlebe olunikwe uPatricia Tena noJordi Milian kwi-2013, UDolores Redondo iveze imbono malunga nenoveli. Ngokutsho kombhali waseSpeyin, “en Umgcini ongabonakaliyo UAmaia unengxaki yoxinzelelo olukhulu lwasemva kokwenzakala, kodwa asikhange sijonge ukuba yintoni ebangele loo nto... En Ilifa emathanjeni sixela into ebangele olo loyiko".
URedondo uphinde waqinisekisa ukubaluleka kwe “bhala ngokunyanisekileyo” ukuze ushukumise abafundi kwibali eliyintsomi. Kule nkqubo yokuyila, uye waqinisekisa ukuba uphonononge uloyiko lwakhe ukuze akwazi ukusasaza iimvakalelo ezithembekileyo. phambili, umbhali ukwazile ukonyusa imvakalelo yokugqithiselwa komlinganiswa oyintloko ngenxa yobunina bakhe obuzayo ekuqaleni kwencwadi.
En Umgcini ongabonakaliyo irhamncwa elirhanelwa ngokubulala okoyikekayo okuchazwe ekuqaleni kwetrilogy yiBassajaun. Lo mkhwa mnye uyaqhubeka Ilifa emathanjeni ngenkangeleko ekuthiwa yiTarttalo, iCyclops enegazi. Malunga, U-Redondo wachaza ukuba izidalwa zasentsomini ziyinxalenye yenkcubeko kunye neenkolo zonqulo ngaphambi kokufika kobuKristu kwiLizwe laseBasque..
Uphuhliso oluzele ziziqendwana
Ubuninzi kunye nobunzulu bebali luphawu lweencwadi ezintathu zeBaztán (kunye ne-prequel yetrilogy, Ubuso basemantla bentliziyo). Ngaloo ndlela, ukuntsonkotha sisiphumo ngqo microstories eninzi umlinganiswa ngamnye. Ngale ndlela, uRedondo ukwazile ukuhlanganisa ibali elonwabisayo nelintsonkothileyo, apho zonke iinkcukacha zibalulekile.
Ukongezelela, umbhali waseBasque ukholelwa ukuba i-Navarrese landscape yenza uhlobo lomlingiswa ngokwalo, olukwazi ukuchaphazela umfundi kunye nabo bonke abathathi-nxaxheba kwiveli. Ukongeza koku, URedondo uthatha ithuba lale ncwadi ukuveza imiba efana "nobundlobongela bamadoda okanye ubunzima bokuxolelanisa umsebenzi nobomi bosapho abanalo abafazi, ngakumbi”.
Ilifa emathanjeni ...
Kunyaka emva kokuba iziganeko zibalise Umgcini ongabonakaliyo, Umhloli uAmaia Salazar uvela kwityala elichasene noJason Medina. Lo mva uzenze uBassajaun ngenjongo yokulahlekisa abasemagunyeni emva kokubulala intombi yakhe, uJohana Márquez.
Nangona kunjalo, inkqubo kufuneka iyekwe ngoko nangoko xa ummangalelwa ubonakala efile kunye nephetshana lokuzibulala elibhekiswa kuAmaia elithi "Tarttalo". Ngenxa yoko, iinkokeli zamapolisa aseSan Sebastián zinyanzeliswa ukuba zicele inkxaso yeengcali zabo ezingcono kakhulu kulolu hlobo lwetyala elingaqhelekanga, iSalazar.
Ityala elitsha eliyoyikisayo
Umhloli akanakukhetha ngaphandle kokukhokela iqela lophando, ngaphandle kokukhulelwa kwakhe kade. Ngokungathi oku akwanelanga, ulandelelwano lweziganeko luyamnyanzela ukuba akhumbule ezinye zeziganeko zasebuntwaneni bakhe (ebenomothuko kuye). Ke, i-sub-plot yexesha elidlulileyo likaSalazar lidibana kunye neziganeko zangoku.
Olunye uloyiko lukaAmaia olusahleliyo lunento yokwenza nesimilo esiphazamisayo sikanina. Ngenxa yesi sizathu, uSalazar uzama ukungaphindi ukuziphatha kukanina ukuze angaphumeleli unyana wakhe. Ngeli xesha, ubunzima bomlinganiswa oyintloko ekulungelelaniseni umsebenzi wakhe nobomi bosapho lwakhe buyabonakala, nto leyo eba ngumzabalazo oqhubekayo wangaphakathi kuyo yonke inoveli.
Ngaba Yintsomi Okanye Iyinyaniso?
Njengoko Amaya thelekisa ixesha lakhe elidlulileyo nelikhoyo ngoku, yena uqala ukucacisa inyani ekunzima ukuyikholelwa: amandla angaphezu kwawemvelo yinxalenye yobomi bakhe. Ngendlela efanayo, abalinganiswa besibini bagqibezela i-panorama ye-protagonist ekufuneka ifunde ukuthembela abo bajikeleze kuye kwakhona. Kwenzeka okufanayo ngokwamkelwa komlingo ohamba naye ukususela ebuntwaneni bakhe.
Izinto ezilungileyo zikaDolores Redondo
Ngokuqinisekile, umbhali imvular Ubonise amaxwebhu abalaseleyo ngexesha lokubhala Ilifa emathanjeni ngokusingqongileyo. Enyanisweni, iimeko ezilusizi ezichazwe ngokweenkcukacha zenza inkalo ebalisayo (exhaphakileyo kuyo yonke iBaztán trilogy) esebenza kakhulu ekuhukeni abafundi.
Umfanekiso wombhali uDolores Redondo.
Ngaxeshanye, ubunzulu bengqondo yomlinganiswa oyintloko kunye nabalinganiswa abahambelanayo bagqibela ngokubeka kunye ibali elihambelanayo. Ngendlela efanayo, iingxoxo zifutshane kakhulu kwaye, kwangaxeshanye, zinenkcazelo eyimfuneko efunekayo neenkcukacha ezininzi ezivezwe kwinoveli.
Kwezinye ii-portals zoncwadi kuvela izimvo ezingalunganga kwi I-Baztán trilogy. Uninzi lwazo lunento yokwenza nokubonakala kwemiba emangalisayo (iziporho, i-tarot, iziganeko ezingaqhelekanga ...) embindini weyelenqe lamapolisa. Nangona kunjalo, ngaba amandla angaphezu kwawemvelo avela kwiyelenqe elinolwaphulo-mthetho?
Ngayiphi na imeko, ibali alishiyi iziphelo ezixengaxengayo okanye izinto ezibekwe ngokungacwangciswanga okanye imiboniso engeyomfuneko. Yonke into inesizathu sokuba (kubandakanywa nemibuzo esisombululo sayo singathobeli inkcazo enengqiqo okanye yenzululwazi). Ngenxa yoko, le ncwadi—ngaphezu kwempumelelo yayo ebalaseleyo kwezorhwebo—ingummeli obalaseleyo wenoveli yolwaphulo-mthetho yaseSpeyin yenkulungwane yama-XNUMX.
Malunga nombhali, uDolores Redondo
UDolores Redondo yinzalelwane yaseSan Sebastian; wazalwa ngoFebruwari 1, 1969. Nangona wayezinikele ekubhaleni ukususela ebusheni bakhe, wakhetha eminye imisebenzi ngexesha lobutsha bakhe. Ngokukodwa, wagqiba ekubeni afundele uMthetho-nangona engazange asigqibe isidanga sakhe-kwiYunivesithi yaseDeusto kunye neGastronomic Restoration kwidolophu yakowabo.
Imibhalo yakhe yokuqala esesikweni yayingamabali amafutshane kunye namabali abantwana, de kwavela Amalungelo engelosi (2009). Kwinoveli yakhe yokuqala, uRedondo ubonise iimpawu zokuqala zebali elizaliswe ziinkcazo ezicacileyo phakathi kweemeko eziphawulwe yintlekele kunye nokwenzakala kwasebuntwaneni. Ezi mpawu ziyabonakala kwi-protagonist ye I-Baztán Trilogy, Amaya Salazar.
Iincwadi zikaDolores Redondo
Ilifa emathanjeni (2013)
Ukunikezela kwisaqhwithi (2014)
Ubuso basemantla bentliziyo (ukuqala ukuya kwi I-Baztán trilogy, 2019).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ilifa emathanjeni
UMarta Abello. Udliwano-ndlebe nombhali weMihlaba yenkungu nobusi